Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Main zvigadzirwa HighQuality Latex ndangariro furo mutsago Wholesale-Rayson Chitubu Mattress Mugadziri
anodziya sink yechigadzirwa chakagadzirirwa kunyatsoburitsa kupisa kunze kwechiedza wozoiendesa mumhepo.
Rayson Global Co, Ltd mubatanidzwa weSino-US, yakavambwa muna 2007 iyo iri muShishan Town, Foshan High-Tech Zone, uye yakagara pedyo nemabhizimusi ane mukurumbira seVolkswagen, Honda Auto uye Chimei Innolux.
Iyo facto Isu tinovimbisa kuti zvigadzirwa zvinotumirwa kune vatengi zvakachengeteka uye zvine mutsindo. Kana iwe uine chero mibvunzo kana uchida kuziva zvakawanda nezveyedu, tifonere isu zvakananga. Zvakare, kuendesa kwedu kuri panguva uye kunogona kusangana nezvinodiwa zvevatengi vese. Parizvino, Rayson apfuura iyo yepasi rose mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Zvese zvigadzirwa zvinosanganisira yedu nyowani chigadzirwa inopihwa nehunyanzvi hwekugadzira, hunovimbiswa mhando, uye nemakwikwi mitengo.
Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira? LC pakuona / neTT, 30% Deposi uye 70% chiyero chiri pamusoro pemakopi ezvinyorwa zvekutumira witinin mazuva manomwe ekushanda. Tinogona kuita metiresi zvinoenderana neyako dhizaini kana kupa OEM sevhisi inongoda iwe kuti utipe chigadzirwa chako mifananidzo kana logo mapikicha. 1.Pa katoni padenga rakatsetseka mukamuri rako rekurara, nyatso dhonza metiresi kunze woisa pamubhedha wako. 2.Chengera nekuchengetera bhegi rekunze nekero uchiva nechokwadi chekuti usacheke ipurasitiki yakaipa mukati kana metiresi, usamhan'arira banga. 3. Bvisa kunze kwemetiresi-yakavharwa pametiresi pamubhedha wako 4Chenjerera cheka bhegi repurasitiki pamwe nekutarisa sezvo machira achangotanga kuparara, Bvisa bhegi repurasitiki. 5. Bvumira maawa makumi maviri nemana kuti mateti yako nyowani iwedzere zvizere.